SUPPORTMM November 13, 2021
( အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာ လူငယ်ဘဝရဲ့တာဝန်ပဲ ။ )
ဘဝမှာ နာကျင်မှုတွေကို လူတိုင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ အနည်းနဲ့အများတော့ ကွာကြမှာပါ။ တချို့တွေအတွက်ကျ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နာကျင်မှုတွေများလွန်းတော့ အသားကျသွားပြီး အဲဒီနာကျင်မှုတွေဟာ ပုံမှန် နိစ္စဓူဝ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘေးကကြည့်နေသူတွေအတွက်တော့ ပုံမှန်ပဲလို့ ထင်ရပေမယ့် ခံစားရသူအတွက်တော့ ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့နဲ့ ပူလောင်ပြင်းပြနေကြရတာပါပဲ။ သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက် လူတစ်ယောက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေနတ်နဲ့ပြန်ပစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ ပိုတောင်မလွယ်တဲ့အရာဖြစ်မှာပါ။ ဘယ်လိုနာကျင်မှုတွေကများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီး အဆုံးစီရင်ပစ်ဖို့အထိ တွန်းပိုခဲ့ပါလိမ့်။ အဲလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုဟာ မအောင်မြင်ခဲ့တာတောင် မကြောက်မလန့် မတွန့်မဆုတ်ဘဲ ဒုတိယတစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားရတဲ့အထိကို နာကျင်မှုတွေက ဘယ်လောက်တောင် ပြင်းထန်စူးနစ်နေခဲ့ရလဲ ဆိုတာကတော့ Kurt Cobain လို့ခေါ်တဲ့ သူမှတပါး တခြားသူဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
၁၉၆၇၊ ဖော်ဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ စက်ပြင်ဆရာနဲ့ စားပွဲထိုးမလေးရဲ့ သားလေးဟာ နောက် ၃ နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာ့ဂီတဂန္ဓဝင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ The Beatles ရဲ့ Hey Jude သီချင်းကို ကောင်းကောင်းညည်းဆိုနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲ ခနဲနေတဲ့ ၃ နှစ်သား၊ တောက်မယ့်မီးခဲလေးပါပဲ။ အဲ့ဒီမီးခဲလေးတောက်တဲ့မီး ဘယ်လောက်ကြီးခဲ့သလဲဆိုတာကတော့ ၁၉၉၂၊ ဇန်နဝါရီလအရောက်မှာ Billboards 200 Album Chart ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနံပါတ် ၁ နေရာမှာ ရက်သတ္တပတ်များစွာ ရပ်တည်နေတဲ့ Pop ဂီတ ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Album တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Dangerous“ Album ဟာ Kurt Cobain တို့ Nirvana ရဲ့ “Nevermind” Album ကို နံပါတ်တစ်နေရာကနေ ဖယ်ပေးရတဲ့အထိကို ကြီးခဲ့တဲ့ မီးတောက်ဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။
[picture : press]
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စွဲကပ်လာတဲ့ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အနေအထားမမှန်တဲ့ ကျောရိုး၊ ပြင်းထန်တဲ့ အစာအိမ်နာရောဂါတွေက Kurt Cobain ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို ကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြိုကွဲသွားတဲ့ မိဘ ၂ ပါးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး၊ အပစ်ပယ်ခံရမှုတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းအချို့ရဲ့ အိမ်တွေမှာ လိုက်ကပ်နေခဲ့ရတာတွေ၊ စာသင်ကျောင်းမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံ ဖယ်ကျဉ်ခံရမှုတွေ စသဖြင့် Kurt Cobain ရဲ့ငယ်ဘဝဟာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ အတော်ရှားပါးခဲ့ပုံပါပဲ။ ဆိပ်ခံတံတားအောက်မှာ တစ်ညလုံးဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ညတွေတောင်ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထုံပေပေချာတိတ်လေးဟာ အပေါင်းအသင်းလည်း ရှားပါးခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ အတန်းထဲက မိန်းမလျာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ပေါင်းသင်းမိရာကနေ ကျန်အတန်းသားတွေရဲ့ မလိုမုန်းထားမှုနဲ့ Kurt Cobain ကိုပါ မိန်းမလျာလို့ အထင်ခံရဖူးပါသတဲ့။ ထင်လည်း Cobain က ဂရုစိုက်တဲ့အထဲတော့ မပါခဲ့ပါဘူး။ အရမ်းနာမည်ကြီး အောင်မြင်နေတဲ့နှစ်တွေတုန်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတောင် သူဟာဘာလိင်လဲမသိဘူးလို့ ဖြေချလိုက်တဲ့အထိကို ဘာကိုမှအရေးမစိုက်တဲ့ Kurt Cobain ပါပဲ။ လူတွေရဲ့ အထူးအာရုံစိုက်ခံရမှုတွေကို စိတ်ပျက်၊ စိတ်ကုန်နေချိန်မို့ ရွတ်ပြီးဖြေချလိုက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ စစ်ကိုင်းရောက်ရုံမက ကျော်သွားပါစေဦး၊ ကိုယ့်မြင်းကိုယ်စိုင်းနေရဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်က ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာကတည်းက Cobain ဆီမှာရှိနေခဲ့ပုံရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သမားရိုးကျ တေးသီချင်း၊ ဂီတအမျိုးအစား ပုံစံတွေကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ တီးခတ်ပုံ၊ သီဆိုပုံ၊ စာသားရေးဖွဲ့ပုံတွေကို Kurt Cobain နဲ့ Nirvana က ကျွန်တော်တို့ နားဆင်ခံစားခွင့် ပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် ကြားဖြတ်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၊ ဖရက်ဒီမာကျူရီ၊ ချက်စတာ တို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေဟာ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်း အရင်ကတည်းက သာမန်အစဆွဲထုတ်ရုံလေးရေးထားတဲ့ essay တိုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။C2D အတွက် အသုံးပြုရာမှာအနည်းငယ်လေး ပြန်တည်းဖြတ်ထားရုံလေးပါပဲ။ ကျွန်တော့်မဖြစ်ညစ်ကျယ် essay တိုလေးတွေကို တခုတ်တရ အသိမှတ်ပြုပြီး ပြောပေးတဲ့ ကော်မန့်လေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော် click ရင်း ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂီတအနုပညာထုတ်လုပ်ဖန်တီးသူတစ်ဦး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေအကြောင်းဟာ ကောင်းကြောင်းတွေပဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အားနာနာနဲ့ဝန်ခံပါရစေ။ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးအကြောင်းကို ဒီလို essay တိုလေးနဲ့ ပြောပြလို့ ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်သလို၊ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးစကား ငှါးပြောရရင်တော့ ခရမ်းသီးရဲ့ ရှေ့နေမဟုတ်ဘဲ မင်းကြီးရဲ့ရှေ့နေဖြစ်နေတာကြောင့် ကောင်းကြောင်းလေးတွေပဲ ရွေးပြောဖြစ်နေတာကိုတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို အတူတူထိုင်ကြည့်ရင်း သူမကြည့်ချင်တဲ့အခန်းတွေကို ရီမု ကိုင်ပြီးကျော်ပစ်နေတဲ့ အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိတဲ့ သူငယ်ချင်းလိုပဲ သဘောထားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေခင်ဗျ။
၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းကာလ ၉၀ အကူးအပြောင်း ကမ္ဘာ့ဂီတရေစီးကြောင်းနဲ့ ဂီတအမျိုးအစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေအကြောင်း ပြောမယ်ဆို Kurt Cobain နဲ့ Nirvana ကို ကျွန်တော်တို့ ထိပ်ဆုံးကနေ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖော်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်က တစ်ထီးတစ်နန်းတည်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Heavy metal ဂီတ၊ မိုက်ကယ်ဂျင်ဆင် ၊ မက်ဒေါနားတို့လို Mega Star တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Pop ဂီတ၊ ကမ္ဘာကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့စတင်ထိုးဖောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Hip Hop/Rap ဂီတ အစရှိတဲ့ ဂီတအမျိုးအစားတွေကြားထဲကနေ Heavy Metal နဲ့ Punk ဂီတရဲ့ Elements တွေကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြီး ရဲရင့်သွက်လက်တဲ့ သံစဉ်စာသားတွေပါဝင်တဲ့ Kurt Cobain တို့ Nirvana ရဲ့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုတွေဟာ ထင်ရှားလင်းလက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Smells like teen sprit“ သီချင်းဟာ လွတ်လပ်စွာဖောက်ထွက်တော်လှန်လိုတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ သည်းခြေကို ကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကျော်ကြားအောင်မြင်မှုတွေကို Kurt Cobain နဲ့ Nirvana ထံ တရှိန်ထိုးယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကို Rolling Stone ရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံးသီချင်းအပုဒ် ၅၀၀၊ RIAA ရဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုရဲ့သီချင်းများ၊ Grammy Hall of Fame စတဲ့ ထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ “Smells like teen sprit” ကို မဖြစ်မနေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ရပါတယ်။ The Voice, X Factor တို့လို ဩဇာကြီးမားတဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာ version အမျိုးမျိုး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ယနေ့ထက်ထိ ပြိုင်ပွဲဝင်နေရတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ခေတ်မီနေဆဲ၊ ဂီတကို သီဆိုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုသူ အသစ်အသစ်သောလူငယ်တွေ ကိုင်စွဲစရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလှေကားထစ်တစ်ခုအဖြစ် Smells like teen sprits ဟာရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ The Beatles ရဲ့ Yesterday၊ John Lennon ရဲ့ Imagine စတဲ့ ဂန္ဓဝင်သီချင်းကြီးများကိုမမီသော်ငြား ဂီတပြိုင်ပွဲစင်မြင့်တွေ၊ Social Networks တွေ YouTube လို website တွေ streaming app တွေမှာ တက်သစ်စလူငယ်အနုပညာရှင်တွေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ cover ပြန်ဆိုနေကြဆဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ရပ်တည်နေမြဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါဆဲပဲ။
[picture : internet]
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Nirvana ရဲ့ Nevermind album ဟာ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို Kurt Cobain နဲ့ Nirvana ဆီကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကနဲ့ ဥရောပ တစ်ခွင် အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အရောင်းရဆုံးထိပ်ဆုံးနေရာတွေ ပြဲပြဲစင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို အောင်မြင်မှုကြီးမားလာတဲ့ အဆိုတော်/ဂီတတီးဝိုင်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ထုတ်လုပ်သူ၊ ပွဲစီစဉ်သူ၊ မီဒီယာ၊ ပရိသတ်တွေ တအုပ်တမကြီး ဟာ Kurt Cobain နဲ့ Nirvana ရဲ့နောက်ကိုပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။ နဂိုဗီဇအရကိုက လူတွေနဲ့ခပ်ဝေးဝေး နေတတ်တဲ့ Kurt Cobain အတွက် ဒါတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေဖြစ်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးကို အလွန်အကျွံလိုသုံးစွဲလာခဲ့ပြီး Cobain ကတော့ သူ့ရဲ့ အစာအိမ်နာကျင်မှုကို ဖြေဖျောက်ဖို့လို့ အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကရရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်ရာတွေအကြောင်းလည်း တခါတရံ အင်တာဗျူးတွေမှာ ထည့်ပြောလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ ကွာရှင်းမှုကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို အလူးအလဲခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေကပ်ကပ်ကြွပ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ မထင်ရင်မထင်သလိုလည်း ပြဿနာထရှာတတ်တဲ့၊ သာမန်ခင်မင်သူတွေနဲ့တောင် ခပ်တန်းတန်းပဲနေတတ်တဲ့၊ လွပ်လပ်ပေါ့ပါးစွာအသက်ရှင်လိုတဲ့ မှုန်ကုတ်ကုတ်ကောင်လေးဘဝနဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ အထူးအာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်မှုကိုခံရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာ၊ သန်းကြွယ်သူဌေးဘဝကြားက အပြောင်းအလဲတွေက Kurt Cobain အတွက် စင်းလုံးချော နေသာထိုင်သာရှိခဲ့မှာမဟုတ်တာအသေအချာပါပဲ။ ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတဲ့အချိန်ဟာ အသက် ၂၄/၂၅ အရွယ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နတ်ရေကန်ထဲပစ်ချလိုက်သလို ရုတ်တရက် အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် အတော်များများ ကမ္ဘာကျော် Celebrity တွေနဲ့ယှဉ်ရင် Kurt Cobain ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ အတော်လေး အတက်ကြမ်းတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
သူ့သီချင်းတွေဟာ ရုတ်တရက်အောင်မြင်မှုကြီးမားခဲ့သလို သူ့သီချင်းတွေကို နားဆင်သူတချို့က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကောက်ယူမှု လွဲမှားကြခြင်းဟာ Kurt Cobain အတွက် ကြီးမားတဲ့စိတ်သောကတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Cobain ရဲ့ Polly ဆိုတဲ့သီချင်းကို မတူညီကွဲပြားတဲ့ point of view တစ်ခုကနေ မုဒိမ်းမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးခဲ့ပေမယ့် တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မုဒိမ်းမှုတစ်ခုမှာ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့သူတွေဟာ အဲဒီသီချင်းကိုဖွင့်ထားပြီး မုဒိမ်းမှုကျုးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကို Cobain ပြန်လည်ကြားရတဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် အလွန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကို လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ကနေ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခံလိုက်ရခြင်းဟာ တေးရေးဆရာတစ်ယောက်အတွက်ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီးဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ လိင်အလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရသူတွေအတွက် Funding တွေကို Cobain ကိုယ်တိုင် Fund-raising လုပ်ပေးတာမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းတွေကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါနာကျင်ခဲ့ရမှုတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေရဲ့ သဟဇာတကွဲလွဲနေမှုတွေကို Cobain အတော်ကြီးကို စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်လာပြီး ဆိုးရွားတဲ့အဆုံးသတ်ကို ရွေးချယ်ပစ်လိုက်ဖို့ခြေလှမ်းတွေစတင်လာခဲ့သလိုပါပဲ။ ၁၉၉၄ မတ်လဆန်းမှာ Cobain ကို ဆေးရုံကိုပိုခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က နာမကျန်းဖြစ်လို့ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Cobain ရဲ့ မအောင်မြင်သွားတဲ့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ Courtney Love ပြန်လည်ကာ ဖွင့်ဟပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်နဲ့ ရက်များမကြာမီ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဇနီးဖြစ်သူက Cobain ဟာ သေနတ်တစ်လက်နဲ့ အခန်းထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ထင်ရကြောင်း ရဲဌာနကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ အခန်းထဲမှာ Cobain နဲ့အတူ သေနတ်အချို့နဲ့ ဆေးတွေတွေ့ခဲ့ရပြီး သူဟာ သူ့ကိုယ်သူသတ်သေဖို့မဟုတ်ကြောင်း၊ ဇနီးဖြစ်သူ Courtney Love နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးနေလိုတဲ့အတွက် အခန်းတံခါးကို လော့ချနေတာဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြချက်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ April လ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ Kurt Cobain ဟာအခန်းတံခါးကိုပိတ်၊ Shotgun ကို ခေါင်းကိုချိန်၊ တစ်ဘဝလုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ နာကျင်မှုတွေကို တစ်ချက်တည်းအဆုံးသတ်ပစ်မယ့်ခလုတ်ကို ဆွဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ နောက် ၃ ရက်အကြာ၊ April လ ၈ ရက်နေ့မှ Cobain ရဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ထာဝရခွဲခွါလို့သွားနှင့်ပါပြီ။ သေဆုံးချိန်က Cobain ဟာ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲထားတယ်လို့လည်း စစ်ဆေးသူဆရာဝန်တွေက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၇ နှစ်ဆိုတဲ့ တကယ်ကြီးကို လင်းလက်တောက်ပဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ ငယ်ရွယ်လွန်းတဲ့အရွယ်မှာ ထွက်ခွါသွားခဲ့တဲ့၊ အဲ့ဒီအသံခပ်ရှရှနဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါးကောင်လေးကို ဒီနေ့ထိနှမျောတသစွာနဲ့ သတိတရရှိနေဆဲ လူငယ်တွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ Nirvana ဆိုတဲ့ စတစ်ကာစာတမ်းရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ တီရှပ်အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလူငယ်လေးတွေကို တွေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့ သတိထားမိနေတော့မှာကတော့အသေအချာပါပဲ။
visit more for the film here @ https://www.imdb.com/title/tt5258726/
Celebrity cobain Heavy Metal kurt Life Balance nirvana Punk ဂီတ ဆောင်းပါးများ သီချင်း အောင်မြင်မှု
Chu Zim December 15, 2021 at 8:52 PM
What?Am I first? 😃
San Zuren December 16, 2021 at 12:13 AM
ဒီတော်လှန်ရေး ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ဒီလောက်မတရားတာကို ငွေလဲမကူ၊ clicks လဲမနှိပ်၊ ပြန်လဲမချရဲဘဲ ရွှီရှောင်လုပ်ပီး မဆိုင်သလို နေတဲ့ လူတွေကို တွေ့တိုင်းကိုနှိမ်မှာ✊
Myo Myat Nway Oo December 15, 2021 at 9:56 PM
Lillian mon December 16, 2021 at 1:03 AM
Sammi December 16, 2021 at 1:12 AM
Wai Zin Mar December 16, 2021 at 1:49 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:03 AM
Dar Dar December 16, 2021 at 5:57 AM
Thu Zar December 16, 2021 at 6:10 AM
Josephine Nay Chi December 16, 2021 at 8:50 AM
I love this article.❤️
Yamin December 16, 2021 at 10:33 PM
Elrics December 17, 2021 at 2:18 AM
Mintar December 17, 2021 at 6:30 AM
AcPhyo98 December 17, 2021 at 7:24 AM
Thazin Haing December 17, 2021 at 3:38 PM
Kan December 17, 2021 at 9:18 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:53 AM
Thandar December 17, 2021 at 10:09 PM
Su Su December 18, 2021 at 5:11 AM
myochitmyanmar December 18, 2021 at 5:29 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 6:20 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 7:05 AM
ZAR2Oo December 18, 2021 at 7:06 AM
Aye Thandar Soe December 18, 2021 at 5:40 PM
MT December 18, 2021 at 7:54 PM
Done ✅ thanks
warwar htwe December 18, 2021 at 9:59 PM
Fedeforce December 18, 2021 at 11:39 PM
Fedeforce December 18, 2021 at 11:50 PM
Noven December 19, 2021 at 2:47 AM
khoon aoune December 19, 2021 at 3:03 AM
Aye Thandar Soe December 19, 2021 at 6:33 AM
Su Su December 19, 2021 at 6:38 AM
Zay Ya December 19, 2021 at 5:45 PM
Chaw Ei Ei Hlaing December 19, 2021 at 7:11 PM
Win December 19, 2021 at 8:26 PM
Mon mon December 20, 2021 at 1:05 AM
DLY December 20, 2021 at 3:52 AM
Su Su December 20, 2021 at 6:43 PM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:40 PM
khoon aoune December 20, 2021 at 8:47 PM
Thu Zar December 20, 2021 at 10:05 PM
Unknown December 22, 2021 at 1:35 AM
Very good article. Thank you Raungni!
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:51 AM
ok December 28, 2021 at 6:12 AM
Unknown January 1, 2022 at 6:42 AM
M January 4, 2022 at 4:25 PM
ဒီႏိုဗို January 12, 2022 at 10:24 AM
Myate January 22, 2022 at 4:40 PM
လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သူတွေကအကျင့်ပျက်ချစားမှု့တင်မဟုတ်ဘူးစာရင်းလိမ်စာရင်းဖျောက်တာတွေပပျောက်အောင်လုပရမည် fighting
梅干 February 4, 2022 at 9:04 AM
Our Revolution must Win February 15, 2022 at 11:44 PM
daiseejadera March 4, 2022 at 7:01 AM
Wynn Casino Las Vegas Tickets - jtmhub.com
Buy 안양 출장안마 tickets online for 여주 출장안마 Wynn's upcoming concert at Bellagio 안양 출장샵 in Las 광명 출장마사지 Vegas at Mohegan Sun Arena. Get all details, opening times and 남원 출장샵 seating chart.
Haymar March 5, 2022 at 7:08 PM
Unknown March 9, 2022 at 4:56 AM
Xol jongdae bias March 13, 2022 at 5:45 AM
Unknown March 13, 2022 at 8:30 AM
တချို့သောလူတွေကတော့ကျောင်းလည်းခိုးတတ်ပြီးပြင်ပအလုပ်တောင်မဟုတ် CDMတွေနေရာကိုဝင်ပြီးဒုဦးစီးတဲ့ဒာတင်အားမရ ပုံတွေတောင်တင်လိုက်ကျ အဲ့လိုလူတွေကိုSPများများလုပ်နိုင်ကျရင်ကောင်းမယ်
Hla Hla Nue March 22, 2022 at 5:08 AM
Harold April 15, 2022 at 9:12 AM
Our Goal is acheiving soon. We have ambition, hope, expectation, confidence that we all togetherness to acheive our Freedom and democracy for our country and our fellow citizen.
Unknown April 16, 2022 at 6:53 AM
Ph ၂ လုံးနဲ့ပြိုင်တူကလစ်နေခြင်းအမှတ်တရ😍
ဒီမှာ ကြောင်မျက်လုံးအသည်းပုံမတွေ့ တွေ့တဲ့ကြောင်ကလေးထည့်လိုက်တယ်🐱
Moeoonwayoo May 4, 2022 at 1:16 AM